Vaovao - Famakafakana ireo anton-javatra lehibe misy fiantraikany amin'ny fananana ara-batana tsy misy tenona
Famakafakana ireo antony lehibe manimba toetra ara-batana tsy misy tenona
Amin'ny fizotry ny famokarana nonwoven spunbonded, ny anton-javatra samihafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny toetoetran'ny vokatra.
Ny famakafakana ireo anton-javatra lehibe misy fiatraikany amin'ny fananana lamba dia manampy amin'ny fifehezana tsara ny fizotran'ny fizotrany sy hahazoana ireo tenona PP spunbonded tsy misy tenona manana kalitao mifanaraka amin'ny fahafahan'ny mpanjifa mampihatra azy.
1.Polypropylene karazana: melt index sy ny lanjan'ny molekiola
Ny mari-pahaizana kalitaon'ny fotodrafitrasa polypropylene dia ny lanjan'ny molekiola, ny fizarana ny lanjan'ny molekiola, ny isotacticity, ny index melt ary ny atin'ny lavenona.
Ireo mpamatsy polypropylene dia eo an-tampon'ny rojom-plastika, manome fitaovana akora polypropylene amin'ny isa sy miavaka isan-karazany.
Mba hahatonga ny nonunven spunbond, lanjan'ny molekiola polypropylene mazàna amin'ny 100,000-250,000. Na izany aza, voaporofo fa ny fananana miempo dia mihetsika tsara indrindra raha manodidina ny 120000 ny lanjan'ny molekiola. Avo ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana farany amin'ity sehatra ity.
Melt index dia masontsivana iray taratry ny toetran'ny rheolojika ny mitsonika. Ny index melt an'ny poti PP ho an'ny spunbond dia matetika eo anelanelan'ny 10 sy 50.
Ny index kely mitsonika dia, ny ratsy kokoa ny fluidity, ny kely kokoa ny tahan'ny fandrafetana, ary ny lehibe kokoa ny haben'ny fibre izay eo ambanin'ny fepetra famoahana mitovy amin'ny spinneret, noho izany ireo nonwovens dia mampiseho fihetseham-po mafy kokoa.
Rehefa mihena ny index index, dia mihena ny viscosity an'ny miempo, tonga tsara kokoa ny fananana rheological, ary mihena ny fanoherana ny fandrafetana. Eo ambanin'io fepetra io ihany dia mihamitombo ny famolavolana. Miaraka amin'ny fitomboan'ny mari-pahaizana orientation of macromolecules dia hohatsaraina ny tanjaky ny tsy tenona, ary hihena ny haben'ny kofehy ary ho malemy kokoa ny lamba. Miaraka amin'io dingana io ihany, arakaraka ny maha avo ny index melt dia mahomby kokoa ny hery tapaka .
2. mari-pana mihodina
Ny fametrahana ny mari-pana mihodina dia miankina amin'ny index melt ny akora sy ny fepetra takiana amin'ny toetra ara-batana ny vokatra. Ny avo kokoa ny index melts dia mila mari-pana mihodina kokoa, ary ny mifamadika amin'izany. Ny mari-pana mihodina dia mifandray mivantana amin'ny viscosity malemy. Noho ny viscosity avo lenta dia sarotra ny mihodina, ka miteraka volo matevina na henjana na marokoroko, izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra.
Noho izany, mba hampihenana ny viscosity an'ny hitsonika sy hanatsarana ny toetran'ny rheolojika amin'ny fiempoana, ny fampitomboana ny mari-pana dia raisina amin'ny ankapobeny. Ny mari-pana miodina dia misy akony lehibe amin'ny firafitra sy ny fananan'ny kofehy.
Rehefa miakatra ny mari-pana mihodina, avo kokoa ny hery vaky, kely kokoa ny elongation tapaka, ary malefaka kokoa ny lamba.
Amin'ny fampiharana, matetika ny mari-pana mihodina 220-230 ℃.
Amin'ny dingan'ny famolavolana ireo tenona tsy misy tenona, ny tahan'ny kiran'ny kofehy dia misy fiantraikany lehibe amin'ny toetra ara-nofo an'ny tenona tsy namboarina.
Raha mangatsiaka mangatsiaka ny fibre, dia mahazo rafitra kristaly monoklinika marin-toerana izy io, izay tsy mahasosotra ny kofehy. Noho izany, amin'ny dingan'ny famolavolana, ny fomba fampitomboana ny haavon'ny rivotra mangatsiaka sy ny fihenan'ny mari-pana ao amin'ny efitrano mihodina dia matetika ampiasaina hanatsarana ny manapaka hery ary mampihena ny elongation ny spunbonded lamba tsy tenona. Ankoatr'izay, ny halaviran'ny kofehin'ny kofehy dia mifandray akaiky amin'ny fananany ihany koa. Amin'ny famokarana lamba tsy voatenona spunbonded, ny elanelana mangatsiaka dia eo anelanelan'ny 50 cm sy 60 cm.
4. Fepetra fandrafetana
Ny mari-pahaizana orientation amin'ny rojo molekiola ao amin'ny filament dia singa iray lehibe manohina ny fahatapahana elongation of monofilament.
Ny fanamiana sy ny hery manapotipotehina amin'ny tenona tsy namboarina dia azo hatsaraina amin'ny fampitomboana ny habetsahan'ny rivotra misoka. Na izany aza, raha be loatra ny haben'ny rivotra suction, dia mora ny manapaka ny kofehy, ary henjana loatra ny volavolany, mirona ho feno ny firafitry ny polymer, ary avo loatra ny crystallinity ny polymer, izay hampihena ny fiantraikan'ny tanjaka sy ny fanitarana amin'ny fiatoana, ary mampitombo ny fahamendrehana, vokatr'izany ny fihenan'ny tanjaka sy ny fanitarana ny lamba tsy tenona. Azo jerena fa ny tanjaka sy ny fanitarana ny nonwovens spunbonded dia mitombo ary mihena tsy tapaka miaraka amin'ny fitomboan'ny haavon'ny rivotra misoka. Amin'ny famokarana tena izy, ny fizotrany dia tsy maintsy ahitsy arakaraka ny filàna sy ny zava-misy marina hahazoana vokatra avo lenta.
5. mari-pana mihodina mafana
Aorian'ny tranonkala noforonina tamin'ny alàlan'ny fanaovana sary dia malalaka izy io ary tsy maintsy ampifamatotra amin'ny fihodinana mafana. Ny lakile dia ny mifehy ny mari-pana sy ny tsindry. Ny fiasan'ny fanafanana dia ny manalefaka sy mampiempo ny fibre. Ny habetsaky ny kofehy malefaka sy mifangaro dia mamaritra ny toetra ara-batana amin'ny lamba tsy misy tenona PP spunbond.
Rehefa manomboka ambany dia ambany ny maripana, ny kofehy kely misy lanjan'ny molekiola ambany ihany no mihalefaka sy miempo, vitsivitsy ny kofehy mifamatotra ao ambany tsindry. Mora misosa ny fibre ao amin'ny tranonkala, kely ny tady fanapahana ny lamba tsy tenona. lehibe ny elongation, ary mahatsiaro malefaka ny lamba fa azo atao manjary mibontsina;
Rehefa mitombo ny mari-pana mihetsiketsika mafana, mitombo ny habetsaky ny fibre malemy sy miempo, mifamatotra akaiky ny tranokala, tsy mora solafaka. Mitombo ny hery vaky ny lamba tsy tenona, ary mbola lehibe ny elongation. Ankoatr'izay, noho ny fifandraisana matanjaka misy eo amin'ny kofehy, dia mitombo kely ny elongation;
Rehefa miakatra be ny maripana, manomboka mihena ny tanjaky ny tsy tenona, mihena be koa ny elongation, tsapanao fa lasa mafy sy mora volo ny lamba, ary mihena ny tanjaka mandatsa-dranomaso. Ho an'ireo entana matevina ambany, vitsy kokoa ny kofehy amin'ny fantsom-panafana ary vitsy ny hafanana ilaina amin'ny fanalefahana sy ny fiempoana, noho izany ny hafanana mihodina mafana dia tokony hametraka ambany. Mifanaraka amin'izany, ho an'ny entana matevina, avo kokoa ny mari-pana mahamay.
6. Tsindry mihodina mafana
Amin'ny fizotry ny fifamatorana mafana, ny asan'ny tsindry fikosoham-bary mafana dia ny fampiraisana ireo kofehy malefaka sy miempo, hampitombo ny firaisan-kina eo anelanelan'ireo kofehy, ary hahatonga ny fibre tsy ho mora solafaka.
Raha somary ambany ny tsindry tsipika mafana, tsy mahomby ny hakitroky ny fibre amin'ny fotoana manindry, tsy avo ny fifamatoran'ny fibre, ary ratsy ny firaisan-kina eo amin'ny kofehy. Amin'izao fotoana izao dia somary malefaka ny fahatsapana ny tànan'ny lamba tsy tenona nopetahany spunbonded, ny elongation amin'ny fiatoana dia somary lehibe, fa ny tondra-pahefana kosa dia somary ambany ihany;
ny mifanohitra amin'izany, raha somary avo ny tsindry tsipika, ny fahatsapana tanana vita amin'ny lamba tsy tenona nopetahany volo dia somary mafy, ary ny elongation amin'ny fiatoana dia somary ambany ihany Fa ny tanjaky ny fanapahana dia avo kokoa. Ny fametrahana ny tsindry mihodina mafana dia misy ifandraisany betsaka amin'ny lanjany sy ny hatevin'ny lamba tsy tenona. Mba hamokarana ireo vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fampisehoana dia ilaina ny misafidy ny tsindry fihodinana mafana mifanaraka amin'ny filàna.
Raha atao teny iray, ny toetra ara-batana amin'ny lamba tsy tenona dia vokatry ny fifandraisan'ny lafin-javatra maro. Na ny hatevin'ny lamba iray ihany aza, ny fampiasana lamba samy hafa dia mety mitaky fizotran'ny teknolojia samihafa. Izany no antony nanotanian'ny mpanjifa ny fampiasana lamba. Hanampy ny mpamatsy entana izany. mandamina ny famokarana miaraka amin'ny tanjona specfic ary manome ny mpanjifa malala ny lamba tsy tenona tena afa-po.
Mpanamboatra 17 taona, Fuzhou Heng Hua New Material Co., Ltd. matoky manome lamba arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa. Nanondrana tany amin'ny firenena sy faritra maro izahay ary tena nankasitrahan'ny mpampiasa.
Tongasoa eto aminay, manomboha aminay ary atombohy ny fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'i Henghua Nonwoven!
Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Vidin'ny lamba lamba, Lamba tsy tenona, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Fitaovana tsy tenona, Pp lamba tsy tenona,